गुटका नेताको मलद्वारलाई हरिद्वार सम्झिएपछि… « Ok Janata Newsportal
गुटका नेताको मलद्वारलाई हरिद्वार सम्झिएपछि…
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अहिले ठूलो शक्ति नेकपाका पक्ष विपक्ष भएका छन् । सत्तासीन रहेको नेकपामा ओली पक्षले कामचलाउ सरकार धानेको छ भने दाहाल–नेपाल पक्ष सडक संघर्षमा छ । मुलुकका तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका यतिबेला सुस्ताएको देखिन्छ । विकासदेखि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक अस्थीरताका कारण अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।
मुलुकलाई निकास दिनका लागि वामशक्ति एकजुट हुने सम्भावना पनि टर्दै गइरहेको देखिन्छ । दुवै पक्षबीच दिनप्रतिदिनको ग्राफ बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबारमात्रै काठमाडौंमा विशाल जनसभा हुँदैछ । जनसभाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने छ । शक्ति झाँगिदै गएपछि एक दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताच्यूत गर्नैपर्छ । लामो समय मुलुकमा राज गरेका राणाहरुदेखि राजाकालसम्म आइपुग्दा नामोनिशाना मेटिने गरी जनताले लखेटेका छन् ।
फेरि दाहाल–नेपाल पक्षको सरकार बन्ला, सत्तामा उनीहरु पुग्लान् त्यतिबेला एक पक्ष पुनः सडकमा देखिने पक्का छ । अहिलेको ओली पक्षले सरकार छोड्दै गर्दा उनीहरु कहाँ जाने ? उनीहरुको सुरक्षित अवतरण के हुन्छ ? यस्तै राजनीतिक दृष्यलाई हेरिरहँदा ओली पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिले आफूले बोकेको गुटका नेताको मलद्वारलाई हरिद्वार ठान्ने प्रवृत्तिकै कारण मुलुक भड्कालोमा गइरहेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको न त ओलीको बहिर्गमन हो, न त दाहाल–नेपाल पक्षको आन्दोलन । अहिले एकिकृत भएर मुलुकलाई विकासको दिशामा अगाडि बढाउने बेला हो । लामो राजनीतिक इतिहासमा मुलुक जहिले पनि दंगा फसादमा रहेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै न कुनै शक्तिले जनतालाई असर गरिरहेको हुन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेको पुस्ताले पनि विकास देख्ने कुनै छाँट छैन ।
तेस्रोे पुस्तासम्मको स्थिति हेर्दा सबैको दिमाग त्यहीँ बुढ्यौली छ । नहुँदो हो त नयाँ अभियानको सुरुवात भइसक्थ्यो । सामाजिक रुपमा लागेका भनिने पुस्ता विदेश बसेकाहरुले रगत पसिना बगाएर कमाएको रकमलाई एक गरिबको खिल्ली उडाउँदै समेट्न उद्दत छ । सञ्चारमाध्यमबाट कनीकनी बोल्नेहरुपनि बार्गेनिङ, रकम असुलीलगायतका फण्डामा देखिन्छन्, यसरी कसरी मुलुक बन्नु र ?
यतिबेला नेपाललाई एकिकृत गरेर विकासमा अगाडि बढाउनका लागि नयाँ सोच र भिजनको खाँचो छ । जुन अमेरिकाको राजनीतिबाट बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकामा निर्वाचनताका जति गालीगलौज, अभद्र व्यवहार भएपनि सत्तामा पुगिसकेपछि जनताले सोही सरकारलाई साथ सहयोग गर्छन् । सबै ट्रम्पजस्तै हुँदैनन् । अन्ततः निर्वाचनको परिणाम ट्रम्पले स्वीकार्नु परेको छ । अब त्यहाँ बाइडेनको पक्षमा जनताले सहयोग गर्ने पक्का छ ।
सत्तामा गइसकेपछि एकजनालाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । सत्तामा पुग्नसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जतिभएपनि सरकार बनिसकेपछि त्यसलाई पछ्याउने बानीको विकास हुनुपर्छ । सरकारले पनि आफूलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने पार्टीको नीति र निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
देउवाले बोलाए पोखराका कांग्रेस नेतालाई काठमाडौं, समाजवादीले भन्यो हामी एमालेसँग जान्छौँ